CO-Extruded guddiga xumbo-saareyaasha & Shirkado - Shiinaha CO-Extruded xumbo guddiga Factory
Gudiga xumbada pvc-ka ee cad-cad ayaa wada isticmaalaya wasakhda waxsoosaarka wax soo saarka, taas oo sameysa qaab dhismeedka guddiga sanduuqa-xudunta waa pluc celluar iyo labada maqaar ee kore waa PCV adag.
19mm sheet PVC balaariyay
Golaha wada-qarash gareynta ayaa ah tiknoolajiyad cusub. Ka duwan guddiga kale ee xumbo, waxaa jira laba lakab oo qolof ah labada dhinac ee guddiga xumbo wada-extruded.
Waxaa lagu gartaa dusha sare oo aad u siman waxaana iska leh guddiga xumbada PVC ee tayada sare leh. Qiimaha sidoo kale waa 5% ka qaalisan yahay noocyada kale ee boharka xumbo ee PVC
guddiga xumbada adag ee unugyada adag
Guddiga xumbada adag ee unugyada adag ee PVC ayaa iska leh guddiga isku-xirka 'PVC-co-extrusion', warqad tayo sare leh oo la balaariyay. Waxyaabaha ay ka kooban tahay kiimikada waa polyvinyl chloride, sidaa darteed waxaa sidoo kale loo yaqaan 'polyvinyl polymeryl board'.
Guddiga dhalaalaya ee loo yaqaan 'PVC Glossy For Furniture'
Guddiga Glossy PVC ee loogu talagalay Furniture-ka waxaa sameeya habka loo yaqaan 'Co-extrusion process', oo ah nooc la casriyeeyay oo ah hannaanka kala-bixidda caadiga ah. Guddiga xumbada isku-dhafan ayaa ka dhigaya xaashida lagu daray saddex lakab: laba lakab oo dibadda ah oo adag oo PVC ah, iyo lakabka dhexe waa xumbo PVC.